गृहमन्त्रीज्यू ! पीडितको आँसुले कुर्सी चिप्लिएला !
कैलाली घटनाका पीडित भन्छन्– गृहमन्त्रीज्यू ! पीडितको आँसुले कुर्सी चिप्लिएला !
गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिज्यू ! तपाईं मधेशको मात्र गृहमन्त्री हैन, देशको गृहमन्त्री हो, तपार्ईं हाम्रो पनि गृहमन्त्री हो । आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा बलियो पकड जमाउन पदको गरिमा नभुल्नुहोस् ।
तपाईंलाई पक्कै अवगत होला, कैलाली घटनाको अघिल्लो दिन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने र जुलुस निकाल्ने सहमति भएको थियो । तर, रातारात योजनाबद्ध रूपमा आन्दोलनकारीले हतियार तयार पारे ।
शान्तिपूर्ण निस्किने भनिएको जुलुसको सुरक्षामा जुटेका सुरक्षाकर्मीलाई ताकी–ताकी गोली हानियो । तपाईंले त अहिले गृहमन्त्रीको पद पाउनुभएको छ । यो पद टिकाइराख्न तपाईंलाई पक्कै मन होला । कसैलाई रिझाउन खोज्दा पीडितको आँसुले सराप्ला ! यो विषयमा विचार पुर्याउनुहोला ।
कैलाली घटनालाई राजनीतिसँग कुनै हालतमा जोड्न मिल्दैन । सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको लखेटी–लखेटी हत्या गर्नु र ताकी–ताकी गोली हान्नु राजनीतिमा पर्दैन । त्यो घटना सरासर नियोजित थियो, आपराधिक थियो ।
राजनीति गरेरै तपाईंले गृहमन्त्रीको पद पाउनुभएको हो । राजनीति गर्नुस्, अझै माथि पुग्नुस् तर, राजनीतिका नाममा अपराधीलाई नच्याप्नुहोस् ।
देशमा कानुन छ, विधिको शासन छ । यो तथ्य भुलेर तपाईंको कहिलेसम्म भलो होला र !
अपराधीले उचालेको भरमा कैलाली घटनाका दोषीलाई आममाफी दिने सोच बनाउनुभएको छ भने त्यो सोच त्यागिहाल्नुस् । हामी परिवार गुमाएको पीडामा छौं, झनै पिडा थप्ने काम नगर्नुस् ।
कैलाली घटनाका दोषीउपर लागेको मुद्दा सरकारले फिर्ता गरे हामी चुप लागेर बस्दैनौं । कानुनी लडाइँ लडिरहन्छौं । दोषीलाई कारबाही हुनैपर्छ । हामीले जस्तो पीडा अरुले भोग्नु नपरोस् ।
(कैलाली घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बाहोराकी श्रीमती शारदा बोहोरासँग टेलिफोनमा गरिएको कुराकानी)
राष्ट्रसेवकको डे«स लगाएको देख्दादेख्दै गोली हान्नेहरू कसरी राजनीतिज्ञ हुन सक्छन् ? सरकारले अरु त के नै गर्न सक्छ र ? दोषीलाई छुटकारा नदेओस् ।
गृहमन्त्रीज्यू ! एक पटक हाम्रो ठाउँमा उभिएर हेर्नुहोस् । अनि तपाईंले आफैं निर्णय गर्नुहुनेछ मेरो श्रीमान्लाई गोली हान्नेलाई कस्तो सजाय दिने भनेर । राजनीतिको आडमा अपराधीलाई काँधमा नबोक्नुस् । प्रहरीलाई ताकी–ताकी गोली हान्ने अपराधीले भोलि तपाईंलाई पनि पुजेर राख्दैनन् ।
तपाईंका पनि छोरी होलान्, बहिनी होलान् । सम्झनुस् त, हामी तपाईंका छोरी–बहिनी भएको भए चार बित्ता उफ्रेर अपराधीलाई कारबाही होस् भन्नुहुन्थ्यो होला । तर, तपाईंलाई कुर्सी प्यारो छ, मलाई श्रीमान् गुमाएको पीडा छ ।
हाम्रा आफन्त फर्केर आउनेछैनन्, यो कुरा हामीलाई थाहा छ । तर, हामीले जस्तो अरुले पीडा खप्न नपरोस् ।
वसन्ती विष्ट (कैलाली घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्टकी श्रीमती)
डिल्ली पाण्डेले काठमाडौंबाट टेलिफोनमा गरेको कुुराकानी